Njengoko uDennis Chung, indoda yakwaHonda eToronto, waqikelela xa iHonda Yurophu yabhengeza iindaba ekuqaleni kukaDisemba, imoto encinci neziphuculiweyo yabantu abancinci eza kungena kwimakethi yaseMelika. Ngapha koko, u-Honda wathi i-CRF yeyona nto ithengiswa kakhulu kwezemidlalo kwimveliso yezithuthuthu. Nge-C entsha ...
Ubume beshishini lokufakwa kwegolide lase China
Ukufakwa kwegolide kudlala indima ebalulekileyo kuhambiso lwamandla kunye nobunjineli kuguquko.Umgangatho wemveliso awuhambelani kuphela nokusebenza ngokukhuselekileyo kwigridi yamandla, kodwa ikwanxulumene nokhuseleko lwepropathi yobuqu. umbane p ...
Ithemba lophuhliso loshishino
1.1 Ingcaciso: Ukufakwa kwesinyithi zizinto zesinyithi ezidibanisa kwaye zidibanise zonke iintlobo zezixhobo, oomatshini bokuhambisa, imithwalo yombane kunye nokudlala indima ethile yokhuselo kwinkqubo yamandla. Badlala indima ebalulekileyo ekusasazeni amandla kunye neenguqu kubunjineli.1.2 Ukwahlulahlula: ...
Amashishini e-China aphezulu-teknoloji
Xinwom lishishini eliphezulu-zobugcisa egxile kuphando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa izincedisi zombane. Njengomthathi-nxaxheba weprojekthi yesizwe ngobuchwephesha obomeleleyo kunye namandla e-R & D, i-xinwom yathathelwa ingqalelo njengeshishini "lobuchwephesha obuphezulu" ngurhulumente ngo-2019. Ukusukela ...